Casio သည် Android Wear ပါသော Limited Edition Smartwatch Pro Trek Smart WSD-F20S ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Androidsis
Casio က Pro Trek Smart WSD-F20S ကိုကြေငြာပြီး Android Wear နှင့်အတူကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေသည့်စမတ်နာရီ
Elvis bucatariu | | စမတ်နာရီ
လက်ပတ်နာရီနှင့်လက်ဝတ်ရတနာကဏ္ in ၏အရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Baselworld သည်ယနေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဘေဆယ်လ်မြို့၌တရားဝင်စတင်ခဲ့သည်။ များစွာသောလူသိများသောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏လက်ပတ်နာရီအသစ်များအပါအဝင်၎င်းတို့၏အသစ်သောတီထွင်မှုများကိုပြသရန်ထိုနေရာတွင်ရှိနေမည် Android Wear နှင့်အတူစမတ်နာရီ.
Casio သည် Baselworld သို့လည်းတက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏အဓိကအသစ်အဆန်းမှာကန့်သတ်ထုတ်ထားသော smartwatch ဖြစ်သည် Pro Trek Smart WSD-F20S နှင့်မော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံပါတယ် Pro Trek Smart WSD-F20 အရာ CES 2017 ကာလအတွင်းတင်ဆက်ခဲ့သည်။
1 Casio Pro Trek WSD-F20S ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
2 Android Wear 2.0
Casio Pro Trek WSD-F20S ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
ယခင်မော်ဒယ်နှင့် WSD-F20S အသစ်တို့အကြားကွာခြားချက်များစွာမရှိပါ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအများစုသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည် နှစ်ထပ်အလွှာ LCD မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားနှင့်အတူ 1.32 လက်မ 320 x 300 လက်မ resolution နှင့် ထို့အပြင်မျက်နှာပြင်သည်အသုံးပြုမှုပုံစံနှစ်မျိုးကိုပေးသည်။ အရောင်နှင့် monochromeသင်ဘက်ထရီပါဝါကိုချွေတာရန်လိုအပ်သည့်အခါ၎င်းသည် monochrome mode ကိုအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေနိုင်သည်။
WSD-F20S တွင်ပါ ၀ င်သောအကြီးမားဆုံးသောအသစ်အဆန်းများမှာ၎င်းဖြစ်သည် အပြာဒြပ်စင်နှင့်အတူအနက်ရောင်အိမ်ရာအဖြစ် နီလာကျောက်သလင်းနာရီသည်ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်မူရင်းမော်ဒယ်၏လိမ္မော်ရောင်အရောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ ကြော့ရှင်း။ သိမ်မွေ့သောအပြင်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်၌သာမကအဖြစ်အပျက်များပိုမိုပါ ၀ င်စေရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူမှုရေး။
မူရင်းမော်ဒယ်လိုပဲ၊ Pro Trek WSD-F20S မှာaလည်းပါဝင်သည် အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အသုံးပြုမှုနည်းသော GPS module သာမန်အသုံးပြုမှုဖြင့်တစ်ရက်ကျော်အနည်းငယ်ကြာသင့်သောဘက်ထရီတစ်လုံးဖြစ်သည်။
ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထားခဲ့ပါ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအကျဉ်းချုပ် နာရီ၏:
ပုံစံ Pro Trek Smart WSD-F20S
operating system ကို Android Wear 2.0
ဖန်သားပြင် ၁.၃၂ လက်မ dual-layer LCD (အရောင်နှင့် monochrome)
resolutiono 320 300 pixels ကိုက x
ရေစိုခံ 50 မီတာ
အာရုံခံကိရိယာ လေဖိအား၊ အမြင့် / အရှိန်လျှော့မီတာ / ဂိုင်ရို၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင်အာရုံခံကိရိယာ (သံလိုက်)
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 4.1 Wi-Fi 802.11b/ g / n
GPS စနစ် ဟုတ်တယ် GLONASS နှင့် Michibiki တို့ပါ
Mအားသွင်းနည်းလမ်း သံလိုက် terminal ကိုအသုံးပြုခြင်း
Tamaထည်၏အနှစ် 61.7 57.7 15.1 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 105 ဂရမ်
Casio သည် Android Wear 2.0 operating system ကို WSD-F20S တွင်ပေါင်းစည်းထားပြီး၎င်းသည်သင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့် fitness monitoring monitoring နည်းပညာအသစ်များအပါအဝင်ပလက်ဖောင်းအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးအားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်နာရီသည် Android 4.3 Jelly Bean နှင့်အထက်ရှိ Android terminal အားလုံးနှင့် iOS9နှင့်အထက်ရှိ iPhone အားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိသည်။
အသစ်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေ Casio Pro Trek WSD-F20S ကိုစတင်ရောင်းချသည် လာမည့်ဇွန်လ 2017စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၅၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာထားသည် ယူနစ် ၅၀၀ သာရှိသည် မော်ဒယ်သစ်၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » Casio က Pro Trek Smart WSD-F20S ကိုကြေငြာပြီး Android Wear နှင့်အတူကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေသည့်စမတ်နာရီ
Samsung သည် Galaxy S3 နှင့်သုံးလကြာငွေပြန်အမ်းနိုင်သည့်အာမခံချက်ပေးနိုင်သည်
[APK] သင် Android အတွက် Super Mario Run ကို Google Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ terminal နှင့်မကိုက်ညီပါက APK ဤနေရာတွင် !!